Tilray waxa uu Quebec ka bilaabay Xashiishad la cuni karo in kasta oo ay jiraan shuruuc xaddidan • Daawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn cannabis Tilray wuxuu ka bilaabay xashiishadda xashiishadda Quebec in kasta oo ay jiraan xeerar xaddidan
Tilray wuxuu ka bilaabay xashiishadda xashiishadda Quebec in kasta oo ay jiraan xeerar xaddidan
albaabka Ties Inc. April 10 2022
maqaal by Ties Inc. April 10 2022
Soo saaraha Kanadiyaanka ee Tilray Brands ayaa ka bilaabay xashiishadda xashiishadda Quebec gudaha Quebec, iyada oo soo saaraha xashiishadda uu hareer maray qawaaniinta adag ee dawladda gobolka ee ku saabsan badeecadahaas.
Cunitaanka cusubi wuxuu muujinayaa sida taxaddarka leh ee loo qaabeeyey alaabada xashiishadda ay ula noolaan karaan xeerar xaddidan oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo caafimaadka dadweynaha.
1 Qaniinyada Solei ee Xashiishada la cuni karo
2 Xeerarka iyo caafimaadka dadweynaha
Qaniinyada Solei ee Xashiishada la cuni karo
Alaabada Tilray waxaa lagu siidaayay astaanta cannabis ee Solei si loogu isticmaalo dadka waaweyn. Fabrice Giguere, oo ah afhayeenka Société Québécoise du cannabis (SQDC), oo ah tafaariiqda tafaariiqda marijuana ee dawladda Quebec ayaa yidhi: "Waa badeecadii ugu horreysay ee sharci ah oo la cuni karo oo lagu iibiyo Quebec.
Alaabooyinka ayaa ka kooban 5 milligram oo THC ah iyo 10 milligram oo CBD ah waxaana lagu macaaneeyey timir halkii sonkor lagu dari lahaa, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka Tilray. SQDC waxay horey u sitay budada THC ee la cuni karo iyo cabitaanada xashiishadda, laakiin badeecada cusub ee Tilray ayaa hadda ah shayga kaliya ee la cuni karo ee ku taxan mareegaha tafaariiqda. Qiimaha liisku waa 6,90 Dollar Canadian ($5,50) xidhmo kasta.
Xeerarka xashiishka ee gobolka ayaa mamnuucaya xashiishadda "nacnac, macmacaanka, macmacaanka, shukulaatada ama wax kasta oo rafcaan u leh kuwa da'doodu ka yar tahay 21 sano," oo mamnuucaya alaabooyin badan oo noocaas ah oo lagu iibiyo qaybaha kale ee Kanada. Giguere wuxuu sheegay in tafaariiqle uu la shaqeeyay Tilray intii lagu jiray wax soo saarka si loo hubiyo in cuntadu ay u hoggaansamaan xeerarka Quebec.
Xeerarka iyo caafimaadka dadweynaha
"Sida oo kale, alaabtani ma aha nacnac ama macmacaan mana soo jiidato dadka da'da yar sababtoo ah qaabkeeda, maaddooyinka iyo baakadaha," Giguere ayaa ku qoray hadal uu u diray MJBizDaily. "Annaga, alaabtani waa hab lagu siinayo macaamiisha ikhtiyaar kale oo ka badbaado caafimaadkooda, maadaama aan loo baahnayn gubasho nooc kasta ah," ayuu yidhi Giguere.
"Tani waxay la jaan qaadaysaa hadafkayaga ah inaan ilaalino caafimaadka dadweynaha annaga oo ka saarayna macaamiisha suuqa sharci darrada ah annaga oo aan dhiirigelin ama kor u qaadin isticmaalka xashiishadda." Ka sokow xannibaadaha xashiishadda la cuni karo, Quebec waxay xaddidaysaa awoodda xashiishadda 30% THC miisaan ahaan. Intaa waxaa dheer, SQDC ma iibiso alaabada uumiga xashiishadda.
Inkastoo uu yahay gobolka labaad ee ugu weyn Canada Quebec waxay ka taagan tahay iibka xashiishadda sharciga ah ee ka mid ah gobollada dadka yar yar. Iibka xashiishadda Quebec ee bishii Janaayo ayaa dhan CA $ 47,9 milyan, dib u dhac ku yimid iibinta xashiishadda cannabis ee billaha ah ee Alberta (CA$ 61,5 milyan) iyo British Columbia (CA $ 50 milyan). Cunto-cunista ayaa aad loo jecel yahay.
Akhri wax dheeraad ah mjbizdaily.com (Source, EN)
CanadaxashiishkaCBDla cuni karosharciyeyntaTHCTilray
DEA waxay sheegtay in iniinaha marijuana loo tixgeliyo hemp sharci ah ilaa iyo inta aysan dhaafin xadka THC
Sidee Delta-8 Gummies u shaqeeyaan sida gaashaanka neerfaha?
Tani waa sababta xashiishadda cannabis ay waxtar u leedahay…
Sidee ninkan khibradda leh ee Wall Street laftiisa u...
Mamnuucida joogtada ah ee Boqortooyada Midowday ee ku saleysan cannabis…